Vaovao - Nirehitra ny herin'ny herin'ny masoandro ary niova ny fanamafisam-peo avy eny ambony tafontrano
Nisy tranga afo maromaro tany New South Wales tamin'ny herinandro lasa teo izay nahatafiditra ny herin'ny masoandro - ary farafahakeliny roa no heverina fa vokatry ny famindran'ireo mpampisaraka tampon-trano.
Omaly, Fire and Rescue New South Wales dia nitatitra fa nanatrika tranga iray tao amin'ny trano iray tany Woongarrah any amin'ny morontsiraka afovoany izy taorian'ny niantsoana triple-zero mpiantso setroka nivoaka avy ao an-tampon'ny trano.
"Ny mpamono afo avy amin'ny tobin'afo Hamlyn Terrace sy Doyalson dia tonga teny an-toerana fotoana fohy taorian'izay ary afaka namono haingana ny afo ary niantoka fa tsy niparitaka lavitra kokoa," hoy ny Fire and Rescue. "Ny sampan-draharaha misahana ny famotopotorana sy ny fikarohana ataon'ny FRNSW dia miasa ankehitriny hametraka ny anton'ny fahamaizana, izay inoana fa nanomboka tamin'ny fanokafana mitokana."
Tamin'ny 30 Desambra, nisy mpamono afo sy polisy nantsoina tamin'ny adiresy iray tao amin'ny tanàna ambanivohitra Newcastle ao Bar Beach taorian'ny tatitra fa nisy takelaka an-tampon-trano teo an-tampon-trano nandoro. Ary maty indray ny afo talohan'ny fahasimban'ny firafitra lehibe nitranga. Ny antony mety tsy voalaza.
Nilaza ny Fire and Rescue NSW tamin'ny taon-dasa fa nitombo avo dimy heny ny afo nateraky ny masoandro tamin'ny dimy taona lasa, saingy tsy nanome isa. Maherin'ny 600.000 ny herin'ny herin'ny masoandro napetraka ao New South Wales, ary na aiza na aiza no ilana fitaovana elektrika dia hisy ny tranga - saingy tsy tokony hekena fotsiny izany raha misy toerana tokony hatsaraina.
Ny FRNSW dia nanamarika teo aloha fa ny switch switch dia mitentina sahabo ho ny antsasaky ny haintrano mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny fanjakana. Na dia tsy voalaza aza ny ampahany amin'ireo mpampisaraka an-tampon-tampon-trano dia azo inoana fa ny ankamaroan'izy ireo dia nomena ny firaketana an-tsary an'ireo fitaovana olana ireo.
Ny switch isolator DC eo an-tampon-trano dia switch iray miasa amin'ny tanana napetraka eo akaikin'ny tontolon'ny tontolon'ny masoandro ahafahan'ny DC mandeha eo anelanelan'ny filaharana sy ny inverter masoandro hakatona. Mampihomehy, natao ho toy ny rafitra fiarovana fanampiny izy io ary ilaina amin'ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro rehetra any Aostralia. Nefa toa isika irery no firenena mbola mila ny fampiasan'izy ireo.
Betsaka ny mpametraka masoandro no manao tsinontsinona ny fametahana jiro DC isolator ao an-tampon-trano ary misy ny fihetsika mba hanesorana ny fepetra takiana amin'ny fenitra Aostralianina - ary tsy ho avy tsy ho ela izany. Misy ihany koa ny fanosehana hamongorana ireo mpitoka-monina vita amin'ny rindrina; fa kosa mila mitoka-monina tafiditra ao anatin'ny inverter masoandro.
Ireo dia fanatsarana roa azo atao - ny iray hafa dia ny tompony manara-maso ny rafitr'izy ireo.
Ny maotera DC isolator tsara kalitao napetraka tsara ary arovan'ny lambam-baravarana mahomby amin'ny ankapobeny. Ny lambam-baravarana dia takiana iray hafa efa nipetraka efa elaela ihany ary toa tsy nisy izany ilay fanamoriana mitoka-monina. Angamba ny fametrahana dia efa nanisy daty ny takiana, fa ny fanamboarana kosa toa somary somary saro-pantarina.
Ny fiarovana ny afo dia antony lehibe hafa hisafidianana mpametraka masoandro tsara. Saingy na inona na inona kalitaon'ny singa sy ny fametrahana ary omena ireo fepetra henjana ao amin'ny rooftop DC switch isolator sy ireo singa hafa amin'ny rafitra herin'ny masoandro dia tsy maintsy miaritra mandritra ny taona maro, zava-dehibe ny fanaraha-maso sy ny fitsapana ny rafitra atao isaky ny taona vitsivitsy.
Nahita ny bokin-herin'ny herin'ny masoandro i Michael taorian'ny fividianany ireo singa hanakambanan-drakitra rafitra PV kely tsy misy tambajotra tamin'ny taona 2008. Nanao tatitra momba ny vaovao momba ny angovo avy any Aostralia sy iraisampirenena izy nanomboka teo.
Rehefa dinihina tokoa, izany no antony nametrahan'izy ireo ny fepetra adalana hametahana ireo isolatera DC amin'ny tampon-trano mba hiteraka olana, sa tsy izany?
Mitovy amin'ny hoe mitaky rafitra rano mafana ny miteraka sy manaparitaka legionella, amin'ny alàlan'ny fandrarana ny rano mafana amin'ny heater-drano.
Tsy dia nahatakatra mihitsy fa ny lojika ny DC mitoka-monina dia tokony ho eo amin'ny valin'ny tontonana. Ny mpampiasa antonony dia tsy hiakatra tohatra hanokana ireo takelaka na inona na inona antony. Ireo mitoka-monina dia tokony ho amin'ny haavon'ny tany mora azo.
Manana rafi-masoandro 3 aho. Ilay voalohany napetraka tamin'ny 2011. Tsy misy DC isolator amin'ny tontonana fa misy DC isolator eo akaikin'ny inverter.
Ny rafitra fahatelo dia napetraka tamin'ny taona 2018, manana DC isolators eo amin'ny valin'ny valindrihana ary koa eo akaikin'ny inverter (andiana DC isolators).
Ny lambam-paty dia mitazona ny masoandro hiala amin'ny switch DC isolator izay manampy azy hampijanona azy mafana loatra ary koa manakana ny fahasimban'ny UV. Izy io ihany koa no mitazona ny orana ratsy indrindra.
ADELS NL1 Series DC Isolator Switches dia ampiharina amin'ny rafitra photovoltaic 1-20KW fonenana na ara-barotra, apetraka eo anelanelan'ny modules photovoltage sy ny inverters. Ny fotoana fampidirana dia latsaky ny 8ms, izay mitazona ny tontolon'ny masoandro azo antoka kokoa. Mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny androm-piainany maharitra, ny vokatray dia vita amin'ny singa manana kalitao faran'izay tsara. Max voltage dia hatramin'ny 1200VDC. Izy io dia mitazona fitarihana azo antoka amin'ireo vokatra mitovy amin'izany.